Tag: manao dokambarotra | Martech Zone
Fivarotana swap: varotra ny serivisy na vokatra azonao zaraina, ho an'ny loharano ilainao
Alatsinainy Aprily 27, 2020 Alatsinainy Aprily 27, 2020 Douglas Karr
Rehefa tsy mahazo antoka izao tontolo izao dia mila manara-maso akaiky ny fikorianan'ny vola ny orinasa ary manalavitra ny fandaniana tsy ilaina. Fomba iray afaka manampy ny varotra ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny loharano ilainao. Izaho dia nitady ireo mpanjifa teo aloha tao amin'ny indostria izay azoko ampiasaina na amin'ny lafiny manokana na amin'ny matihanina ary nitahiry vola be tamiko nandritra ny taona maro. Ny areti-mifindra voan'ny coronavirus amin'izao fotoana izao dia vinavinaina handany ny toekarena manerantany
Mpivarotra maro no mampiasa teknolojia iray izay ankafizin'izy ireo na ahazoany aina ary tsy miraharaha ny hafa. Mpanohana goavana amin'ny automatisation aho ary ny mpivarotra dia manararaotra ny fandefasan-kafatra amin'ny fomba, endrika, na endrika - na dia tsy manisy ratsy ny ezak'izy ireo amin'ny varotra aza. Mikasika ny orinasa iray manararaotra atiny amin'ny alàlan'ny tranokalany, lahatsoratra, whitepapers, fandinihana tranga na bilaogin'orinasa misy azy, mino aho fa misy lakileny telo hanamboarana ny